Xanuunka COVID-19 oo dib ugu soo laba kacleeyay Koonfurta Somaliya | Dhacdo
Xanuunka COVID-19 oo dib ugu soo laba kacleeyay Koonfurta Somaliya
Waxaa isa soo taraya xaaladaha xanuunsidaha COVID-19 ee maalin kasta laga diiwaangeliyo Gobolada Koonfurta Somaliya, gaar ahaan Magaalada Muqdisho.
Agaasimaha oo u waramay BBC ayaa yiri “Isbuucaan aan hadda ku jirno iyo isbuucii la soo dhaafay tiradii ugu badnaa ee aan helnay ayay noqotay, muddo lix bilood ah. Bishii August ee sanadkii hore ayaa noogu dambeysay xaalado sidaanoo kala ah.”
Dhakhtarka ayaa bulshada qudheeda ku eedeeyay inay qayb ka tahay faafitaanka xanuunka, haddii aanay diyaarba inay u hoggaansamaan awaamiirta waaxda caafimaadka, ee ay tahay in looga hortaggo faafitaanka xanuunka.
“Dadka mar hore ayay iska iloobeen jiritaanka xanuunkan, waxaanan hirgelin amaba dhaqangelin waxyaabaha lagu xakameeyo xanuunka, oo isu socodka ayaa sidiii u socdo, dadku ma xirna afgashiga, gacan-qaadkii aad buu u badan yahay, goobaha la isugu yimaado waala buuxdhaafiyay, taas waxay aad u sahashay degdeg u faafka xanuunkan iyo inuu gaaro dadka nugul, ee uu soo ridanayo inuu si degdeg ah ku gaaro.” Ayuu yiri Dr. Cabdirisaaq Yuusuf.
Soo laba kacleynta xanuunka ayaa imaanaya, iyadoo toddobaadkii hore ee Hay’adda Caafimaadka Dunida (WHO) sheegtay in bishan February ay Somaliya heli doonto tallaalka COVID-19.